Amperin'asa ny birao fandraisana fitarainana ao Ambotsirohatra - Taratra du 14 fevrier 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Corruption Madagascar Amperin’asa ny birao fandraisana fitarainana ao Ambotsirohatra – Taratra du 14 fevrier...
Tsy an-kiandriandry. Efa mihodina sy am-perinasa amin’izao fotoana izao ilay birao natao handraisana ny fitarainana eny anivon’ny biraom-panjakana sy ny asam-panjakana ankapobeny. Nisokatra, ny zoma teo, izany birao manokana mandray izany. Voalaza fa efa misy ireo miandraikitra ny fandraisana ny fitarainana. Eo koa ireo miditra an-tsehatra amin’ny fanadihadiana amin’ireny olana na raharaha hoentin’ny olom-pirenena eo anivon’ity birao eny Ambohitsorohitra ity. Tsy vitan’izany fa manaraka akaiky izany ny filoha Rajoelina. Anisan’ny tena andrasana amin’ireny fitarainana ireny ny fomba fiasa sy ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Efa nanitrikitrika rahateo ny Praiminisitra Ntsay Christian teny Androhibe, afakomaly, fa tsy maintsy hirosoana ny fanovana eo anivon’ny fitantananan- draharaham-panjakana. Na izany aza anefa, mbola banga ny filoha na ny lehibe hitarika ity birao ity.
Article précédentMadagascar – Fonjan’ny ngeza – Inona no vaovao du 14 fevrier 2019
Article suivantArrestation sans mandat judiciaire de Mbola Rajaonah – Expressmada du 14 février 2019